Ashley Cole ayaa iska diiday wada hadalo qandaraas kordhin ah.
8/6/2012 12:40:00 P
| Comments() Muqdisho--KNN--Mustaqbal ciyaryahanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka England Ashley Cole ayaa waxa uu sii gelaya mugdi kedib markii habeenimadii xalay uu iska diiday wada hadalo xidigasi uu qandaraaska ugu kordhinayo kooxdiisa Chelsea. Mustaqbal ciyaryahanka kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo xulka England Ashley Cole ayaa waxa uu sii gelaya mugdi kedib markii habeenimadii xalay uu iska diiday wada hadalo xidigasi uu qandaraaska ugu kordhinayo kooxdiisa Chelsea.
Wararka ayaa sheegaya in ciyaryahanku uu la kulmay madaxda kooxdasi si ey uga wada hadlaan in ciyaryahanku uu ku sii sugnaado Chelsea lakin waxa sidoo kale wararka ka imanaya magaladda London ay sheegayaa in xiddigani uu wada hadalo hoose kula jiro PSG oo ciyarta horyaalka League Oneka Faransiiska.
Labada kooxood ee Chelsea iyo Paris Sant German ayaa isku af gartay dhowaan in xidigasi uu ku biro PSG isla markaana Chelsea ayaa u dhaqaaqday ciyaryahan ka ciyara difaaca bidix kana tirsan Olypque De Marselle.